सेना परिचालन विद्येयकबारे कांग्रेसले ‘प्रोपोगाण्डा’ गर्यो :पाण्डे – Esancharpati
सेना परिचालन विद्येयकबारे कांग्रेसले ‘प्रोपोगाण्डा’ गर्यो :पाण्डे
2 months ago Sunday, March 24, 2019esancharpati
काठमाडौं, १० चैत्र । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्न सक्नेगरि सेना परिचालन विद्येयक ल्याउन लागेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजनीतिक प्रोपागाण्डा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयकबारे कोही पनि द्धिविधामा पर्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संविधानलाई अवेज्ञा गरेर सरकारले कुनैपनि काम गर्दैन् । सरकार संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नै अघि बढ्छ । जनताको स्पिरिटअनुसार नै अघि बढ्छ । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।’
प्रधानले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गरेर आफूमा शक्ति थोपर्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘भोलि प्रधानमन्त्री त्यस्तै कडा खालको पर्नुभयो भने सेना परिचालन गर्नेबारे के हुन्छ ? अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि अधिकार एकीकृत गरिरहनुभएको छ । राजश्वदेखि लिएर राष्ट्रिय अनुशन्धानलाई आफू मातहात ल्याउनुभएको छ, अब अन्तिम हतियार भनेको सेना हो ।’
आफूहरुले उक्त विद्येयकलाई धेरै कुरा विचार गरेर रोकेको दाबी गरे । उनले भने,‘विषम परिस्थितिमा सेना परिचालन गर्ने भन्ने अनि सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ, यो गलत कुरा हो ।’
उनले सेना परिचालनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह नै नगरेको जिकिर गरे । उनले भने,‘यस्तो विषयमा हामीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्दथ्यो ।’ उनले नेकपाका नेता सोम पाण्डेले भनेजस्तो सेना परिचालन विद्येयक २ वर्ष पहिले कांग्रेसको पालामा नै ल्याईएको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको जिकिर गरे ।
उनले थपे,‘संघीय कानून नै बनेको छैन, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अधिकार दिन खोजिएको छ । हामीलाई यो कुरा मान्य छैन्। विद्येयक संशोधन गर्नुपर्छ ।’
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले सेनाको नाममा राजनीतिक कसैले पनि गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । उनले भने,‘अहिले ल्याईएको सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयकमा शंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरु देखेको छु । अहिलेपनि म सेनाको पेन्सन खाइरहेको छु । बन्दुक, गोली, बारुद र युद्धकला भनेको यो राजनीति होईन । यो ब्यारेमा राम्रोसँग राखिनुपर्छ । अहिलेका रक्षामन्त्रीले ‘डबल–स्ट्याण्ड’ देखाईरहेका छन् । चिप्ला कुरा गरेर हुँदैन् ।’
बस्न्यातले ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री भएर आएको दिनदेखि नै सेनाको छबि गिर्दै गएको आरोप लगाए । उनले भने,‘रक्षामन्त्री भनेको त सेनाको पिता हो । तर, उहाँ रक्षामन्त्री भएपछि सेनाको छबि गिर्दै गएको छ । किनभने नेपाली सेनाले विम्स्टेकमा भाग लिएन भनेर दुनिया गाली गरियो, प्रधानमन्त्रीले गाली खाए, सेनाले गाली खायो, यी रक्षामन्त्रीले स्विकृति दिने चुईंक्क बोलेनन् । किन ?’
देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदा देशको सबैभन्दा ठूलो चूनौति भारतीय नाकाबन्दी भनिएको उल्लेख गर्दै बस्न्यातले भने,‘यो रक्षामन्त्रीका मुखबाट उहाँले बनाएको सुरक्षा नीतिबाट आउने होईन, परराष्ट्रमन्त्रीले विनम्रताका साथ उहाँमार्फत यी चिजहरु आउनुपर्दथ्यो, तर कस्तो गल्ती भएको छ । के तपाईको नेपाली सेना के हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो रक्षामन्त्री के अब लड्नुहुन्छ त भारतसँग ? मेरो रक्षामन्त्री भनेको सेनाको पिता हो, अस्ति अमेरिकाको सहायक रक्षामन्त्री आएर चीनको विरुद्धमा कुरा गर्दाखेरि मेरो रक्षामन्त्रीको घाँटीमा के अड्किएको थियो ? त्यसको प्रतिवादमा मित्रराष्ट्र चीनको राजदुतले बेलुका विज्ञप्ती निकाल्नुपर्दा उहाँले किन बोल्नुभएन ? हामीले धेरै रक्षामन्त्रीहरु देख्यौं, धेरै देख्यौं रक्षासचिवहरु, धेरै देख्यौं प्रधानमन्त्रीहरु, तर सुरक्षा परिषदको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकल खल्तीबाट सर्लक्क सेना परिचालन गर्नसक्ने विद्येयक रक्षामन्त्रीले किन लैजाने ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
बस्न्यातले प्रधानमन्त्रीले एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्नसक्नेगरि विद्येयक लैजानु रक्षामन्त्रीको गम्भिर गल्ती भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘म आर्मीको प्रवक्ता होईन, तर मैले यस्ता सुरक्षा परिषद मैले धेरै देशको अध्ययन गरेको छु । मेरा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार भन्नेहरु यीनका ८÷१० वर्षका रेकर्डहरु हेर्नुहोस् । यीनले खाएका डिएफआईडिका पैसाहरु, हामीले हिजो युद्ध लड्दा यो सेनालाई ठोक्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर यत्रा यत्रा किताब लेख्नेहरु अहिले प्रधानमन्त्रीको त्यो ठाउँमा कुदिरहेका छन् ।’
वर्तमान गृहमन्त्रीका सल्लाहकार पनि त्यतिवेला सेना ढाल्नुपर्छ भनेर बोल्ने मान्छे भएको उनको भनाई थियो । उनले प्रश्न गरे,‘यो पृष्ठभुमि हो, आज सेनालाई किन खल्तीको गुडियाजस्तो प्रयोग गर्न खोजिँदैछ ? तर, रक्षामन्त्रीले विषय नबुझेकाहरुले विद्येयकको विरोध गरे भनेर भन्नुभएको छ, यस्तो चिप्लो रक्षामन्त्री मैले आजसम्म देखेको छैन् ।’
उनले आफूहरुलाई राजनीतिक कुरा र चिल्ला कुरा नआउने भन्दै मनमा अहिलेपनि बन्दुक रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी अहिलेपनि बन्दुके हौं, यो मनमा बन्दुक छ । हामी दाहिने बाहिने कुरा जान्दैनौं । सेनाले एस ओर नो सिकाउँछ ।’ उनले सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयक नियतवस ल्याईएको आरोप लगाएका छन् ।
बस्न्यातले थप प्रश्न गरे,‘नेपालको सरक्षा अवस्था ठिक छ कि छैन भनेर तीन वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखले गर्ने हो कि राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो ? नेपाली सेना भनेको तपाईको खल्तीको भुटेको मकै हो र ? यो तवरले विद्येयक ल्याउनु भनेको भोलि सेनालाई प्रहरीलाई गिजोलेजस्तो ढाल्ने योजना हो । भोलि यो ओली सरकार वा कम्युनिष्ट सरकारविरुद्धमा जनता आए भने पनि सेना परिचालन हुनसक्छ।’
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी धर्म बहादुर बानियाँले सेना परिचालनसम्बन्धी विद्येयक असान्दर्भिक भएकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘यो विद्येयक असान्दर्भिक छ, त्यसैले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’
सुरक्षा परिषदको बैठकमा मन्त्रीहरु सहभागी नहुने तर ती मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागी हुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ त ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले थपे,‘सेना परिचालनसम्बन्धी सल्लाह दिने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हो त भन्दा प्रधानसेनापति हो, प्रधानसेनापतिलाई सुरक्षा अवस्था, कमिकमजोरी र सेनाको क्षमता के छ ? भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ, उहाँले दैनिक रुपमा देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ भनेर मुल्यांकन गरिराख्नुभएको हुन्छ । तर, सेना परिचालनसम्बन्धी अहिले बनेको विद्येयकमा उहाँ सदस्य हुनुहुन्न । उहाँलाई सदस्यमा राखिएको छैन् । भनेपछि यो कस्तो किसिमको विद्येयक हो त ?’
नेपाली सेना राष्ट्रको सेना भएको बताउँदै बानियाँले भने,‘नेपाली सेना राष्ट्रको सेना, यो हरेक नेपालीहरुको सेना हो, यो कुनै एक व्यक्तिको सेना होईन । पूर्व मेचिदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि पहाड र पहाडदेखि तराईसम्म सबैको सेना हो । राष्ट्रको महत्वपूर्ण शक्ति संयन्त्र भनेको नै सेना हो । त्यसकारण सेनासँग खेलाँची गर्न मिल्दैन् ।’
उनले संसारको अधिकांश राष्ट्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद हुने उल्लेख गरे । उनले भने,‘नेपालले विश्वको चलनचल्तीको अभ्यास गरिरहेको छ । वर्तमान विद्येयक सान्दर्भिक छैन् । यो विद्येयकले कुनै एक व्यक्तिको महत्वकांक्षा पुरा गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ, तर सरकारले त्यो विद्येयकबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
उनले सेना परिचालनसम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक प्रावधानमा केही पनि कमी नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सेना परिचालनसम्बन्धी संविधानमा भएका प्रावधानमा कुनै कमिकमजोरी छैन् । वर्तमान विद्येयकलाई खारेज गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारसँग बहुमत छ, उनीहरुले विद्येयक पेश गरेका छन् । उनीहरुले पास गर्न सक्छन् । तर यो विद्येयक पास गर्नुहुँदैन् । यो देशको हितमा छैन् ।’
प्रतिनिधि सभा बैठक २०७५ चैत १० गते, १:०० बजे, तेस्राे